निजी बैंकको फोर्टफोलियो धेरै हुनु सरकारी बैंकलाई नयाँ चुनौती हो « Artha Path
निजी बैंकको फोर्टफोलियो धेरै हुनु सरकारी बैंकलाई नयाँ चुनौती हो
किरण कुमार श्रेष्ठ,
सिईओ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककले संभवत इतिहाँसमै पहिलोपटक सरकारलाई लाभांस दिन लागेको छ । शुक्रबार बैंक स्थापनको ५५ वर्षमा प्रवेस गरेको छ । आजभन्दा झण्डै ४ वर्ष अघि आफ्ना प्रतिस्प्रधिलाई पञ्छाउदै किरण श्रेष्ठ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आडभरोशामा सिईओ नियुक्ती भएका थिए । उनै श्रेष्ठले पनि सोचेका थिएनन् कि वाणिज्य बैंकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउँछु भनेर । १२ प्रतिसत १ अर्व ८ करोड नगद सरकारलाई वाणिज्य बैंकले लाभांस दिने भएको छ । गत आवमा ५ अर्व ४ करोड मुनाफा गर्न सफल बाणिज्य बैंकको नाफा सबैभन्दा बढी हो । बैंकको ५५ वर्षे इतिहास र भावी रणनितीका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः–
तपाँईले आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघिनै सरकारलाई लाभांस खुवाउने हुनुभयो, यसको लागी के के गर्नुभयो ?
पहिलो कुरा त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ऐतिहासिंक उपलव्धी भयो । यो बैंकले सरकारलाई लाभांस वितरण गर्न सफल भयो । लाभांस दिनको लागी बैंकले नाफा गर्नुपर्ने हुुन्छ । हाम्रो लगातार बढ्दो थियो तर गत वर्षको यस बैंकको नाफा अन्य बाणिज्य बैंकभन्दा सबैभन्दा बढी ५ अर्व ४ करोड गर्न सफल भयौं । हामीसँग डिभिडेन्ट दिनको लागी चाहिने सम्पुण आधारभुत कुराहरु पुरा भैसकेको छ ।
लाभांस दिन सुरु हुनु भनेको के अव बाणिज्य बैंक स्वस्थ्य र बलियो भएको हो ?
एकदमै बलियो र स्वस्थ्य भएको संकेत हो । अव यो लाभांस वितरणलाई स्थीतरता दिने हो । यो बैंकलाई अझै बलियो र स्वस्थ्य बनाउने काम बाँकी छ ।
लगभग डुव्यो भनिएको सरकारी बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक दुबैले लाभांस दिए । सरकारी बैंकहरु बल्ल व्यावसायीक बनेका हुन ?
यो बैंक याहाँ आइपुग्नुमा कैही कारणहरु छन । हामीले बैंक यो अवस्थामा आइपुग्नुको आधार वर्ष भनेर २०५९/०६० लाई लिएका छौं । सो समयमा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा वित्तिय सुधार कार्यक्रम आइसकेपछि केही कुराहरुमा धेरै ठुलो सुधारहरु गरियो । त्यसबेला आन्तरीक नियन्त्रण प्रणालि खुकुलो थियो त्यसलाई बलियो बनायौं । अर्को कर्मचारी संख्या र कामको तालमेल थिएन । धेरै कर्मचारी बाणिज्य बैंकको लागी बोझिलो भएको थियो त्यसको लागी स्वेच्छिक अवकास योजना ल्याइयो । कर्मचारी जति चाहिने थियो त्यसमै सिमीत राख्ने काम ग¥यौं । तेस्रो अर्को हामीसँग भएको खराव कर्जाको दर थियो एनपिए घटाउने काम भयो । ५ वर्षमात्रै विदेशी व्यवस्थापनको नेतृत्वमा यि दुई बैंक चले त्यसपछिको व्यवस्थापनले सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आए । बाणिज्य बैंकको यो अवस्था एकै दिन एकै रात वा एकै वषमा आउको होइन यो कुरा सबैले सम्झनुपर्छ । हामी अहिले अन्य बेंकसंग प्रतिस्प्रधि, व्यावसायीक, धेरै क्षेत्रमा सुधारका काम गरेका छौं ।
काम अझै गर्न धेरै बाँकी छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईको कार्यकाल त सकिनै लाग्यो नि ?
व्यक्ती नै सबैकुरा होइन । एउटा कुरा त हो पनि । संस्थाको निरन्तरताको लागी निती बनाउका छौं बलियो टिम खडा गरेका छौं । तलैसम्म प्रतिस्प्रधि भावनाको जाग्रित भएको छ । बाणिज्य बैंकले पनि अन्य बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ नि । हामीले बाटो खन्ने काम गरेका छौं मोटर गुडाउने काम मात्रै बाँकी छ अव ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सरकारको अर्वौ फण्ड निव्र्याजी चलाउन पाउँछ, तर पनि यसको पोर्टफोलियो अरु बैंक सरह नै छ नि ?
सरकारको फण्ड भएपनि हामीले परिचालन मात्रै गर्ने हो । निवृतिभरणमा हामी अर्वौ पैसा दिइराखेका हुन्छौं । सरकारको फण्डले गर्दा हामीलाई तरलताको समस्य छैन । सहज भएको पनि छ । हामी सरकारी फण्डलाई छुट्ट्याएर हेरौं न ।
फोर्टफोलियो निजी बैंकले जित्न लागिसके नि ?
अहिले निजी बैंकहरु मर्जरको क्रममा फोर्टफोलियो धेरै भएको हो । यो कुरा हामी जस्ता सरकारी बैंकलाई नयाँ चुनौती हो । हाम्रो बैंकको स्थानलाई कन्टिन्यु गर्न कसरी जाने विषयमा सोचेका छौं ।
सरकारी कोष नपाउने हो भने त बैंकको अवस्था कमजोर देखिएला नि ?
त्यस्तो हुँदैन, अझै बढि प्रतिस्प्रधि हुनुपर्ने हुन्छ । अलि बढि चुनौती छ ।
निजी बैंकको जस्तो सेवामा प्रतिस्प्रर्धाए गर्न किन नसकिएको ?
हामी बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन फाफियाद्वरा निर्देशित बाणिज्य बैंक हो । यसमा सरकारको स्वमित्व छ । हामीले सरकारको पनि नितीनियम मान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कष्टमरलाई स्तरीय सेवा दिनुपर्ने चुनौती छ । अर्को हामीहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया लोकसेवाबाट मात्रै हुन्छ । भनेको समयमा कार्मचारी नियुक्ती गर्न सकिएको छैन । हिजोका दिनमा म्यानुअल स्टमबाट म्यानुअलमा आयौं । हामीले विगतमा टेक्नोलोजिको दृष्टिले अझै सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
तपाई कार्यकालको अन्त्यितिर हुनुहुन्छ, नियुक्ती हुने बेलामा गरेका वाचाहरु के के पुरा गर्नुभयो ?
निक्कै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो । म निष्चत सहमती सम्झौंता सहमती बोर्डसँग गरेर यस संस्थामा आएको हुँ । डिपोजिट, कर्जा लगानी, नाफा, नेट इन्टेष्ट इनकम लगायतका विषयमा मैले बोर्डसँग सम्झौता गरेको थिएँ । यी इण्डिकेटरहरुमा पहिले बनाएको भन्दा धेरै माथि छौं । साँढे ३ अर्व नाफा कमाउँछु भन्ने टार्गेड लिएर आउको थिएँ ५ अर्व प्लस भयो । कर्जा ८४ अर्व पु¥याउछु भन्ने थियो आज १ सय ५० अर्व पुग्यो । सबै इन्डीकेटरमा माथी छु । हामी सरकारले तोकेको २२ स्थाथिय तहमा पनि पुगिसकेका छौं । सरकारले लिएको निति सहुलियतपुर्ण कर्जाको नितीमा हामी अगाडी नै छौं । एक साखा एक एटिएम गरेका छौं २८ लाखको ग्रहाक संख्याबाट ४ लाख थप्न सिफल भयौं । पहिले एग्रिमेन्टमा नभएको तर कामको शिलशिलामा थप काम गरेको छु । यो सरकारको बैंक भएपनि बाणिज्य बैंक हो भन्ने भावनाको जागृत हुनुपर्छ । अव स्पार्ट आरविवि र क्लीन आरविवि बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । अव पुराना बुकहरु फाइलहरु झुत्रा कागज केही रहँदैन । त्यसैलाई हामीले क्लीन आरविबि भनेका हौं । अव वाणिज्य बैंक पुरानो फोहोरयुक्त हुँदैन । अर्को वाणिज्य बैंकलाई टेक्नोलोजीले स्मार्ट पनि बनाउनुपर्छ । अहिले योङ कर्मचारीको बाहुल्यता बढ्दो छ ।
अव तपाँईले गर्न बाँकी के के छन ?
काम गर्न थुप्रै बाँकी छन । अहिले हामीले देशभर १४ ओटा नयाँ आफ्नै कार्यालयको लागी अत्यधुनिक विल्डीङ बनाउँदै छौं । यी १४ ओटा विल्डिङ बनाउनुपर्ने फिजिकल काम नै भैहाल्यो । वाणिज्य बैंकको रिक्स म्यानेजमेन्ट र कम्प्लायन्समा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु छन । अर्को हामीसँग भएको आइटि स्टम पुरानो छ त्यसलाई अपगूेड गर्नुपर्ने जरुरी छ । साइबर सेक्यूरेटिजका कामहरु सुरु गरेका छौं त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ । क्यापिटल वृद्धि गर्नको लागी नयाँ क्यापिटल प्लान ल्याउनु जरुरी छ ।
आगामी कार्यकाल रिन्यू होला ?
त्यो कुरा मैले आफैले कसरी भनौं । सबैले मेरो कामको मुल्यङ्कन गरेका छन । सरकारले पनि नजिकबाट बैंकको फाइनान्सीयल इण्डीकेटरहरु हेर्ने जाँच्ने गरिहेको होला । मैले त तोकिएको दिनसम्मको कुरा गर्ने हो ।
तपाँईको नाम त गभर्नरको दौडमा पनि सुनिएको थियो नि ?
म लामो समय बैंकर भएको र पहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट पनि गभर्नर भएको इतिहाँस छ । मेरो नाम बजारमा चर्चा हुनु स्वभाविक छ ।
वाणिज्य बैंकको आइपिओ कहिले आउँछ ?
बाफियामा सरकारको स्वामित्वमा राख्न सक्ने । ३० प्रतिसत पव्लिकमा नगए पनि हुने भन्ने अफसन पनि छ । सरकारी बैंक रहनुपर्छ र सरकारका निती कार्यक्रम छुट्टै ढंगले जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ ।
आरविबि मर्चेन्ट बैंकिङको काम निकै सुस्त देखिन्छ किन महत्व नदिएको ?
महत्व दिएको हो । क्यापिटल मार्केटका अरु कम्पनीको तुलनामा हामी पछाडी नै छौं । भर्खरै नयाँ व्यवस्थापन नियुक्ती गरेका छौं अव नयाँँ ढंगले जान्छ ।
वाणिज्य बैंकले म्युचुअल फण्ड चलाउँदैन ?
म्युचुअल फण्ड र डिभेञ्चर दुबै आउँदैछ ।